Otu esi arụ ọrụ na hazie njikwa nne na nna na Windows | Nzukọ mkpanaka
Njikwa nne na nna nke sistemụ arụmọrụ ọ bụla na -enye anyị ohere ijikwa na jikwaa ojiji ha na -eji kọmpụta yana ibe weebụ ị gara. Ụmụaka na -amalite imekọrịta ihe na kọmpụta mgbe ha ka na -etolite etolite, site na ịntanetị, ha na -enweta ụwa ozi na -enweghị njedebe, ma nke mmụta ma nke na -ebibi ihe.
N'isiokwu a, anyị ga -azụtara gị otu esi arụ ọrụ na ịhazi Windows 10 njikwa nne na nna, ọ dịkwa mma maka Windows 11, njikwa nne na nna nke na -enye anyị ohere ijikwa oge ejiri ngwa, amachi ohere ịnweta ngwa yana ụfọdụ ibe weebụ. ..
1.1 Tinye PIN iji chekwaa akaụntụ n'ime Windows 10
2 Mepụta akaụntụ maka obere na Windows
3 Tọọ njikwa nne na nna na Windows
3.1 Ozi izugbe gbasara akaụntụ nwata
3.2 Tọọ oge enyo
3.3 Hazie ihe nzacha ọdịnaya n'ime Windows
3.4 Chọọ nwa gị nwoke
4 Kedu ihe anyị nwere ike ime na njikwa nne na nna Windows
Windows na -arụ ọrụ na profaịlụ onye ọrụ. Nke ahụ bụ, ihe mbụ anyị ga -eme iji hazie njikwa nne na nna na Windows bụ imepụta akaụntụ onye ọrụ maka ya. Ọ bụrụ na ruo ugbu a ị jiri naanị kọmpụta gị ma enweghị paswọọdụ iji chedo ịnweta, ị ga -agbakwunye otu ma ọ bụrụ na ịchọghị ka nwa gị jiri akaụntụ gị na -eme ịgabiga njikwa nne na nna guzobere na akaụntụ gị.
Isi ihe ọzọ anyị ga -eburu n'uche bụ na Naanị onye nchịkwa (ndị) otu nwere ike ịmepụta akaụntụ onye ọrụ ọhụrụ iji nweta akụrụngwa. Ọ bụrụ na ọ bụ naanị gị ka akụrụngwa ahụ, akaụntụ ahụ bụ onye nchịkwa. Agbanyeghị, ọ bụrụ na onye ezinaụlọ na -emepụta akaụntụ ọhụrụ, o yikarịrị ka ọ bụghị akaụntụ nchịkwa.
para chọpụta ma ọ bụrụ na akaụntụ ahụ bụ onye nchịkwaỊ ga -enwerịrị nhọrọ nhazi Windows, nweta menu akaụntụ - Ozi gị. Naanị n'okpuru onyonyo ị na -eji dị ka onye ọrụ, a ga -egosi ya ma ọ bụrụ na akaụntụ gị bụ ụdị onye nchịkwa.
Mmemme kachasị mma iji rụọ ọrụ njikwa ndị nne na nna na ikpo okwu ọ bụla
Tinye PIN iji chekwaa akaụntụ n'ime Windows 10
Windows 10 na-enye anyị ohere iji koodu PIN ọnụọgụ 4 iji chedo ịnweta akaụntụ anyị, ụzọ dị ngwa ma dị mfe karịa iji okwuntughe. Iji tinye PIN iji chekwaa akaụntụ Windows bụ isi, akaụntụ onye nchịkwa, anyị ga -emerịrị usoro egosiri n'okpuru:
Mbụ anyị na -enweta nhọrọ nhazi Windows site na ụzọ mkpirisi keyboard Igodo Windows + i.
Na-esote, pịa na Akaụntụ.
N'ime Akaụntụ, anyị na -aga na ngalaba Nbanye nbanye.
Na kọlụm aka nri, n'ime ngalaba Ajikwaa otu i si abanye na ngwaọrụ gị, anyị họrọ Windows Ndewo PIN anyị na-etinye koodu ọnụọgụ 4 iji chedo ịnweta akaụntụ onye nchịkwa Windows.
Mepụta akaụntụ maka obere na Windows
Mgbe ị na -eke akaụntụ ọhụrụ na Windows iji tọọ njikwa nne na nna, a chọrọ akaụntụ email. Microsoft ga -eduzi anyị na usoro niile, yabụ na ọ dịghị mkpa imepụta ya na mbụ.
Nke mbụ, anyị ga -enwerịrị oghere Nhọrọ nhazi Windows site na ụzọ mkpirisi keyboard igodo Windows + io ma ọ bụ site na mmalite menu site na ịpị cogwheel.
Na-esote, pịa na Akaụntụ na n'ime akaụntụ na ngalaba Ezinụlọ na ndị ọrụ ndị ọzọ.
Mgbe ahụ, a ga -egosipụta windo ọhụrụ ebe ọ na -akpọ anyị oku ka anyị tinye email nke akaụntụ anyị chọrọ ịgbakwunye. Dịka ọ bụ akaụntụ ọhụrụ yana na ọ bụkwa obere, pịa Mepụta otu maka obere.
Na mpio ọzọ, anyị ga -abanye ma faịlụ aha njirimara dị ka paswọọdụ na anyị chọrọ iji na akaụntụ ọhụrụ.
Ọzọ, anyị ga -etinyerịrị aha na aha nwata ahụ yana obodo obibi ya na ụbọchị ọmụmụ ya.
Buru n'uche na anyị ga -etinyerịrị data niile nke ọma ebe ọ bụ na ọ bụrụ na ejighi njikwa akaụntụ ahụ ma ọ bụ chefuo okwuntughe, Microsoft ga -arịọ data a n'aka anyị iji hụ na anyị bụ ndị nwe ya.
Na mpio ọzọ, anyị ga -abanye aha njirimara na paswọọdụ nke akaụntụ obere.
Dịka ọ bụ akaụntụ nwata, a ga -egosipụta ọkwa na -agwa anyị na dịka ọ bụ akaụntụ nwata, chọrọ nkwenye nke nne na nna ma ọ bụ onye nlekọta iwu. N'okwu a, anyị ga -ahọrọ abụ m nne ma ọ bụ nna ma ọ bụ onye nlekọta.
Iji jikọta akaụntụ nwata ahụ na akaụntụ Microsoft anyị, nke anyị ga -eji enyocha yana / ma ọ bụ kpachie arụmọrụ nke akaụntụ ahụ, anyị ga -abanye aha njirimara nke akaụntụ anyị yana paswọọdụ.
Na mpio na -esote Microsoft na -akpọ anyị òkù ka anyị nye Microsoft nkwenye ka ịmepụta akaụntụ na data a ga -echekwa na sava ya dị ka aha, ụbọchị ọmụmụ, adreesị ozi -e ... N'okpuru akwụkwọ ahụ, anyị ga -abịanye aka na ya. akwụkwọ na -ede aha anyị.
Microsoft na-akpọzi anyị ka anyị nye ohere ka akaụntụ ọhụrụ ahụ banye na ngwa ndị na-abụghị Microsoft. Ọ bụrụ na anyị amachi ohere a, obere ga -enwe ike iji ngwa Microsoft bipụtara.
N'ikpeazụ, a ga -egosipụta ozi achọrọ nke ga -agwa anyị nke ahụ Emepụtara akaụntụ ahụ nke ọma nakwa na akaụntụ nwata ahụ adịlarị na otu ezinụlọ.
Ugbu a, anyị ga -edobe oke nke anyị kwenyere na ọ dabara na akaụntụ nke obere nwa anyị mepụtara n'ime ndị otu anyị. Iji mee nke a, anyị ga -pịa Nchedo ụmụaka.
Nkwụsị nke ojiji na nnweta profaịlụ nke obere, anyị nwere ike mepụta na / ma ọ bụ gbanwee ha site na nhọrọ nhazi nke Windows - Akaụntụ - Ezinaụlọ na ndị ọrụ ndị ọzọ na ịpị Jikwaa Ntọala Ezinụlọ n'ịntanetị.
Tọọ njikwa nne na nna na Windows
Ozugbo anyị mepụtara profaịlụ nke obere, a ga -egosi ya na Akaụntụ - Ezinụlọ na ngalaba ndị ọrụ ndị ọzọ. Iji gosi njedebe nke ojiji, pịa Jikwaa akaụntụ ezinụlọ na ịntanetị.
Ibe weebụ ga -emepe na -akpaghị aka ebe anyị ga -abanye data akaụntụ nne ma ọ bụ nna ma ọ bụ onye nlekọta. Ihe kpatara usoro a site na ibe weebụ ọ bụ maka a na -emekọrịta mgbanwe niile anyị na -eme na ngwaọrụ niile ebe ahaziri akaụntụ obere nwa.
Ihe mbụ anyị ga -eme iji bido igosi ọrụ nke ngwaọrụ jikọtara na akaụntụ ahụ bụ jikọọ ngwaọrụ na akaụntụ ahụ. Ọ bụrụ na ọ bụ kọmpụta Windows, anyị ga -abanye na kọmpụta nke mbụ. Ma ọ bụrụ na ọ bụ Xbox, anyị ga -etinyerịrị aha onye ọrụ na console.
Nchedo Ezinụlọ, dịka akpọrọ Njikwa Nne na Nna Windows, Ọ dịkwa maka gam akporo (ọ bụghị maka mbadamba) na iPhone ngwa na -enye gị ohere ịchọta ụmụaka site na ekwentị mkpanaaka gị.
Agbanyeghị, ikpo okwu abụọ a na -ejikọkwa usoro njikwa nne na nna na -enweghị mgbochi na iji ngwa ndị ọzọ, dị ka ọ dị na nke a, yabụ, n'agbanyeghị na ọ na -enye nsogbu, ọ ka mma iji usoro njikwa nne na nna nke sistemụ arụmọrụ ọ bụla.
Oge mbụ anyị ji akaụntụ nwata ahụ anyị kere banye na kọmpụta Windows, a ga -ajụ anyị ka anyị tinye paswọọdụ akaụntụ wee kpọọ anyị ka anyị mepụta koodu PIN iji chedo ịnweta akaụntụ ahụ. Site ugbu a gaa n'ihu, akaụntụ nwata ahụ gosipụtara na Nchedo Ezinụlọ ọ ga -amalite ndekọ ọrụ gị.
Ugbu a oge eruola ịmara ihe niile ọrụ na Nchedo Ezinụlọ na -etinye n'aka anyị maka obere ka o jiri akụrụngwa rụọ ọrụ nke ọma, jiri ngwa akwadoro maka afọ ha, chịkwaa oge ha ji ngwaọrụ ...
Site na Nchedo Ezinụlọ anyị nwere ike:
Nwalee ngwa nchekwa ezinụlọ Microsoft
Ihe nzacha ọdịnaya
Nchekwa ịnya ụgbọ ala
Email ezinụlọ gị
Chọrọ enyemaka ọzọ?
Iji nweta nhọrọ nhazi maka akaụntụ obere, anyị ga -pịa aha otu nke egosiri n'okpuru aha onye ọrụ. Ọ bụrụ na ị na -eji naanị otu otu, a ga -egosipụta ojiji ọ bụghị aha otu. Ọ ga -abụ n'oge a ka anyị ga -pịa iji nweta nhọrọ nhazi akaụntụ.
Ozi izugbe gbasara akaụntụ nwata
Site na nhọrọ izizi dị na Nchedo Ezinụlọ, anyị na -ahụ taabụ Ozi Izugbe. Taabụ a na -egosi anyị nchịkọta nke otu anyị siri hazie ngwa ahụ, oge dị na enyo, enweghị ike ...
Oge ihuenyo. Ngalaba a na -egosi anyị eserese na iji ngwaọrụ ejikọtara na akaụntụ obere nwa n'ime ụbọchị 7 gara aga yana nkezi kwa ụbọchị. Na mgbakwunye, ọ na -egosikwa anyị oge gafere kemgbe ikpeazụ ị jiri ya.
Ngwa na egwuregwu. Ngalaba ngwa na egwuregwu na -enye anyị nzacha afọ emebere, nzacha dabere na ụbọchị ọmụmụ yana na anyị nwere ike ịgbanwe n'oge ọ bụla. Ọ na -egosikwa anyị ngwa a na -ejikarị na nkezi kwa ụbọchị, na -enye anyị ohere igbochi ojiji ya ozugbo.
Chọọ na Weebụ. Na ngalaba ọchụchọ na webụsaịtị, anyị na -ahụ okwu ndị a na -enyocha site na Bing (naanị igwe nchọta dị) yana ibe weebụ ndị ị gara na ọnụọgụ nleta. Na mgbakwunye, ọ na -enye anyị ohere igbochi ibe anyị achọghị ka ị gaa.
Mmefu. Ọ bụrụ na anyị na -etinye ego mgbe niile na obere akpa nwa anyị iji zụta ngwa ma ọ bụ egwuregwu, na ngalaba a anyị nwere ike ịhụ ma ego ọ hapụrụ na ihe o mefuru ya.
Egwuregwu Xbox n'ịntanetị. Site na ọrụ a, anyị nwere ike ịmata oge niile oge na -agafe na ngwa ọ bụla wee guzobe oke ojiji ma ọ bụ gbochie ngwa ahụ ozugbo.
Tọọ oge enyo
Ngalaba a na -egosi eserese na eserese nkezi kwa ụbọchị ngwaọrụ na eserese nke ụbọchị 7 gara aga nke ngwaọrụ niile ejikọtara, n'etiti kọmpụta na consoles Xbox.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịmata nkọwa ojiji, ya bụ, oge ejiri na ngwa ọ bụla, pịa na ngalaba Ngwa na egwuregwu. Iji guzobe oke ojiji n'otu ngwa ma ọ bụ gbochie ya ka ị ghara iji ya, anyị ga -pịa ngwa ọ bụla, mgbe ahụ anyị ga -edobe oke oge ma ọ bụ anyị ga -egbochi ngwa ahụ site na bọtịnụ kwekọrọ.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ igosipụta ojiji nke akụrụngwa kwa ụbọchị, site na isi peeji nke Oge Ihuenyo, anyị na -agagharị na ebe egosipụtara aha akụrụngwa ọ na -eji wee pịa ya iji gosipụta awa eji eme ihe n'obodo.
Iji gbanwee usoro ụbọchị ọ bụla, anyị ga -pịa ụbọchị wee họrọ site n'oge ruo oge ole ị nwere ike iji ya na awa ole ị nwere ike iji ya. N'ime oge a dum, naanị ị nwere ike iji ya maka awa ole anyị haziri.
Hazie ihe nzacha ọdịnaya n'ime Windows
Iji nyochaa ọdịnaya nke obere na -enweta site na ịntanetị, anyị ga -pịa nhọrọ ahụ Ihe nzacha ọdịnaya. Nhọrọ a na -egosi ndepụta nke ibe weebụ niile ị gara n'ime ụbọchị 7 gara aga, yana ọnụọgụ nleta.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ igbochi ụfọdụ ibe weebụ a, naanị anyị ga -pịa Block, nke dị n'aka nri nke ibe weebụ ahụ nke egosiri na listi ahụ. Dịka ọ bụ akaụntụ nwata, Microsoft na -eme nhọrọ ahụ na ndabara Họchaa ọchụchọ na webụsaịtị na -adịghị mma na -echebe obere ihe site na ọdịnaya ndị okenye yana mee ka ọchụchọ dị mma na Bing.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ka nzacha ọdịnaya rụọ ọrụ, anyị ga -eji Microsoft Edge, ebe ọ bụ na ọ bụghị na anyị agaghị enwe ike jikwaa weebụsaịtị nke nwa anyị na -eleta.
Site na ịgbanye nzacha a, yana hụ na ndị ọrụ na -eji Edge, Windows na -egbochi ojiji nke ihe nchọgharị ndị ọzọ, yabụ anyị ga -ahụ na nwa anyị anaghị eji ihe nchọgharị ndị ọzọ aga leta ibe ndị okenye ma ọ bụ chọọ okwu ndị nwere mmetụta.
Nhọrọ nzacha Ọdịnaya Nchekwa Ọdịnaya Ezinụlọ na -enye anyị ohere mechie ọnụ ọgụgụ ibe ị nwere ike ịga na ndepụta. Ibe ọ bụla ọzọ na -adịghị na ndepụta nke anyị mepụtara, ihe nchọgharị ga -egbochi ya na akpaghị aka.
Ọ na-enyekwa anyị ohere gbochie ụfọdụ ibe weebụ na anyị achọghị ka ụmụ anyị ghara ịga site na nhọrọ saịtị egbochiri.
Chọọ nwa gị nwoke
Otu n'ime ọrụ ole na ole ngwa nyere maka ngwa mkpanaka, na -ahazi naanị na akaụntụ nwata, na -enye anyị ohere ịchọta ọnọdụ nwa anyị n'oge ọ bụla. Site na ịpị ebe na -egosi anyị ọnọdụ ahụ, a ga -egosi maapụ na ọnọdụ nke ama nwa anyị nwoke.
Ọ bụrụ na anyị ejiri akaụntụ nne na nna hazie ngwa ahụ, anyị ga -enwe nweta otu ozi nke anyị chọtara na ibe weebụ a, mana na -enweghị nhọrọ iji gbanwee presets. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịgbanwe ya, anyị ga -aga na ibe weebụ site na ihe nchọgharị ọ bụla.
Mgbe ị na -ahazi ngwa ahụ n'aha nwa anyị, anyị ga -enwerịrị nhọrọ nhazi ebe ọ bụ ọrụ na -enye ohere ịchọta nwa ahụ ọ nwere nkwarụ obodo.
Kedu ihe anyị nwere ike ime na njikwa nne na nna Windows
Dabere na afọ, ọ yikarịrị ka ị na -eso nwa gị na -arụ ụka oge niile ọ na -etinye na YouTube. Ọ bụrụ na anyị sitere na ndị ọrụ netwọkụ mmekọrịta dịka Instagram, TikTok ma ọ bụ Facebook, anyị ghọtara nke ọma afọ ojuju ha na -emepụta n'uche.
Site na njikwa nne na nna Windows, anyị nwere ike mechie ojiji YouTube kwa ụbọchị, dị ka ọmụmaatụ. Anyị nwekwara ike belata ojiji ụfọdụ ngwa dị ka Roblox, Minecraft ma ọ bụ Fortnite.
Site na ahụmịhe nke ha, nwatakịrị ga -aghọta ngwa ngwa na ha nwere obere oge iji kọmputa na / ma ọ bụ egwuregwu ụfọdụ, n'ihi na ga -eme ka ọtụtụ oge dị. Ihe anyị ga -edo anya bụ na site n'ịkọwa ihe kpatara nwa ahụ nke na -amanye anyị ime mkpebi a, ọ ga -adị mfe ime ka ha ghọta ya karịa na -enyeghị nkọwa ọ bụla.
Enwere ike gbanwee oke ndị a n'ụzọ dị mfe na ngwa ngwa site na webụsaịtị Family Safety site na ihe nchọgharị ọ bụla. Mgbe oge eji eme ihe na -eru nso ọgwụgwụ ya, a ga -egosipụta ozi n'ihuenyo gwa nwa ahụ.
N'ụzọ dị otu a, ọ bụrụ na nwa anyị na -ekiri ihe nkiri ma ọ bụ na -egwu egwuregwu na anyị achọghị ịhapụ ya ọkara, anyị nwere ike ịgbatị ntakịrị nke ahụ maka otu ụbọchị ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Sistemụ arụmọrụ » Otu esi eme ma hazie njikwa nne na nna na Windows